Coronavirus FAQs - Somali - Twin Cities PBS
Top Questions - Somali
TOP QUESTIONS – IN SOMALI | SOOMAALI
Barnaamijkii ugu horreeyey ee “Almanac” oo u gaarka ah korona faayrus, oo baxay 28kii Febraayo, 2020, waxaa ka dhashay su’aalo badan oo nala ku soo weydiiyey boostada intarnetka (email) oo aan awoodi weynay inaan ka jawaabno markaan hawada ku jirnay. Halkan waxaa ku qoran shan ka mid ah su’aalaha ugu badan ee inta badan la isweydiiyo oo ay la socdaan jawaabihii ay ka bixiyeen Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) iyo dhakhtar Craig Bowron oo ka mid ah dhakhaatiirta ka shaqeysa Magaalooyinka Mataanaha ah.
Ma run baa in dadka aan caddaanka ahayn ay yihiin dadka ugu badan ee uu ku dhaco COVID-19?
MDH: Dadka aan caddaanka ahayn iyo Hindida Mareykanka ah waxay la kulmaan sinnaan la’aan badan (dakhli ahaan, guryo ahaan, shaqo ahaan, iwm) taas ayaana ka dhigeysa in ay si weyn ugu nugul yihiin caafimaad darro badan iyo xaalado caafimaad oo ah wateyaal ama joogto. Dadka aan caddaanka ahayn iyo Hindida Mareykanka, gaar ahaan muhaajiriinta iyo qaxootiga, waxay badanaaba ka shaqeeyaan meelo loo aqoonsaday “adeegyada ama ganacsiyada muhiimka ah” sida meelaha waxsoosaarka, warshadaha cuntada, iyo meelo laga yaabo in uu COVID-19 ku faafo haddii aan si habboon looga hortagin. MDH waxay ka shaqeyneysaa in ay hubiso inaan helno qaab sinnaan gaar ah oo wax looga hortago, faafinta macluumaadka, uruurinta xogta iyo baaris loo adeegsanayo hab ah sinnaanta caafimaadka gaarka ah.
Goorma iyo sidee la ii baarayaa haddii aan isaga shakiyo calaamadaha xanuunka?
Dr. Bowron: Marka hore waa in la ogaado in baarista infakshanka Covid-19 (“RT-PCR,” ama “PCR”) uu ka duwan yahay baarista lagu xaqiijinayo infakshan horey ugu dhacay (“difaaca jirka,” “dheecaanka ilaaliya jirka,” “barootiinka difaaca”).
CDC waxay u gudbisay habka baarista ee PCR waaxyaha caafimaadka gobollada, marka Minnesota, Waaxda Caafimaadka Minnesota, ururrada daryeelka caafimaadka iyo isbitaallada ayaa wada dejiyey yool wax looga baarayo gebi ahaan bukaannada qaba calaamadaha xanuunka. In kastoo la badiyey qalabka baarista, ilaa ay ka gaarto meesha ugu sarreysa, weli mudnaanta koowaad ee baarista waxaa la siinayo waa dadka khatarta weyn ku jira, sida bukaanka isbitaallada jiifa, dadka koox ahaan ugu nool xarumo guryo u ah ama guryaha dadka waaweyn, kuwa ay liidato xaaladahooda caafimaadka ee khatarta ku jira, iyo dadka ku nool/ka shaqeeya meelaha xanuunku ka dillaacay, iwm. In kasta oo MDH ay weli sameyneyso baarista Covid-19, inta badan waxaa sameeya ururrada daryeelka caafimaadka iyo sheybaarro si gaar ah loo leeyahay, oo MDH wax shaqo ah kuma laha. Taleefan kula xiriir dhakhtar/goob caafimaad haddii aad rabto in lagu baaro.
Maalmo hore waxaan sheegnay in xirashada maasgarada (een) aysan qofna ka celin karin in la qaadsiiyo COVID-19. Balse hadda dad aad u tiro badan ayaa bilaabay in ay xirtaan. Miyaan ku khasbanahay inaan maasgaro xirto? Halkee iyo goorma?
Dr. Bowron: Arrintan ah qofka xirta iyo qofkaan xiran maasgarada waxay muujineysaa sida ay u dhib badnaan karto farriimaha ah wacyigelinta caafimaadka dadweynaha. Dulucda farriintii hore waxay ahayd, in aysan dadka oo dhan ku filneyn qalabka iyo maasgarada, oo sidaas awgeed laguma talin in ay maasgarada xirtaan dadka aan khatarta weyn ugu jirin qaadista xanuunka faafaya. Waxaan rabnay in loo daayo dadka khatarta weyn ku jira—sida shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka laga helay infakshanka. Weli waxaan ku jirnaa dhaqaaleynta maasgarada, laakiin hadda oo uu Covid-19 aad ugu faafayo dadweynaha, waxaa lagu talinayaa in qof walba xirto maasgaro maro ah ama wax lagu daboolo wejiga (balse khasab ma aha maasgarada qaliinka ee N-95) dabooliddaas waxay ku fiican meelaha aysan suuroobeyn in ay dadku kala fogaadaan.
Haddii faayruskan lagu kala qaadi karo in meelo la taabato oo dabadeedna wejiga la sii taabto, ka warran haddii faayrusku gaaro cuntada (kaba dhig in uu qof xanuunka qaba ku qufacay ama ku hindhisay) marka cuntadaas la cuno xanuunkii ma laga qaadi karaa?
Dr. Bowron: Waa su’aal wanaagsan, in kasta oo kiiskan yahay mid macquul ah oo si ahaan la fahmi karo, haddana sida ay sheegtay CDC, “Hadda weli lama hayo wax caddeyn sheegeysa in COVID-19 la isugu gudbin karo cuntada.”
Haa, cuntadu waxa ay ka mid tahay meelaha uu gaari karo qoyaanka, sida miisaska, albaabbada meelaha laga furo, xarfaha teebka kambuyuutarka iwm. Laakiin sida ay CDC xustay, “Guud ahaan, waxaa yar in laga badbaado koroona faayruska gaar ahaan meelaha la taabanayo, waxayse u badan tahay in ay aad u yar tahay faafidda xanuunkan ee cuntada ama baakadaha alaabta lagu soo diro ee soo socda maalmo ama toddobaadyo, ama ku jiray qaboojiye, ama baraf gudihiis.”
Ka warran cuntada laga soo qaato makhaayadaha? Iyada oo la filanayo in cuntada lagu soo diyaariyo nadaafad fiican, waxaa ay halista faayruska ku jiri karto waa sanduuqa biitsada ee ma aha biitsada kulul, xaashida rootiga is-mariska lagu duubo ee ma aha rootiga kulul, iwm. Marka waa in cuntada lagu rito saxan ama meel nadiif ah, gacmaha waa in la dhaqdo, dabadeedna bisinka u qabo. Sidaas ayaa ah talada caafimaadka u wanaagsan, xataa ka hor intuusan bilaaban Covid-19.
Miyey aad u yar tahay in waayeelka la qaadsiiyo faayruskan haddii uu habdhiska difaacoodu fiican yahay?
Dr. Bowron: Waxaa jirta caddeyn muujineysa in difaaca jirka uu sii xumaado marka la gaboobo, laakiin haddii difaaca jirku uusan weligiis la kulmin faayrus ah mid (“cusub”) sida Covid-19, jirku iskama caabbin karo marka faayruskaas la qaadsiiyo, dabadeedna infakshankii sidaas ayaa lagu qaadayaa. Marka qof xanuun la qaadsiiyo, sida caadiga ah difaaca oo xooggan ayaa ka celiya, gaabis ka dhiga, yareeya, oo infakshanku khatar kuma keeno. Marka laga hadlayo “waayeelka,” waxaan ognahay da’da ay jiraan (cimrigii sannadihii ay soo noolaayeen) in aysan muhiim u ahayn xaaladdooda jir ahaaneed, laakiin weli waa wax jira oo mudan in la tixgeliyo.
Halkee baan ka heli karaa macluumaad aan ku kalsoonaan karo markaan safrayo?
MDH: CDC waxay bartooda intarnetka ku soo qoraan talooyinkooda ugu dambeeya ee arrimaha safarka. Waxaad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xanuunka Korona Faayrus 2019 (COVID-19) iyo Macluumaadka Safarka ka heli
Dhakhtar Bowron: [Sida aad ku arki doonto barta intarnetka…] heerka ugu sarreeya ee taxaddarka waa “Heerka Digniinta 3-aad: Ha Aadin Safar Aan Muhiim Ahayn,” oo waxaa ku xiga “Heerka Feejignaanta 2-aad, Ku-talagalka Taxaddarka Hore.”
Waa da’dee dadka ku jira khatarta ugu badan?
MDH: Dadka waaweyn iyo dadka ku sugan xaalado ah caafimaad-xumo, sida in laga hayo wadnaha, sambabbada iyo kuwa qaba sokorowga, ayaa tusaale ahaan u muuqda in ay khatar weyn ugu jiraan xanuunkan halista ah.
Dhakhtar Bowron: Dad da’ kasta ah ayaa sida ay u badan yihiin lagu daartay korona faayrus, laakiin ku dhawaad 80% kiisaska dalka Shiinaha waxa uu ku dhacay waa da’da u dhaxeysa 30 ilaa 69. Inta badan dadka sida daran ugu xanuunsaday ama u dhintay waxay u badnaayeen waa dadka waaweyn (laga bilaabo 50 jirka, laakiin dadka ugu sii badan waa kuwa ka sii weyn 80 jirka) iyo/ama dadka qaba dhibaatooyin kale oo la xiriira caafimaadka.
Yaa sameeya baarista xanuunka COVID-19, yaase hadda laga baarayaa?
MDH: Sheybaarka Caafimaadka Dadweynaha ee Waaxda Caafimaadka Dadweynaha Minnesota ayaa hadda sameyneysa baarista COVID-19. CDC dhawaan ayey wax ka beddeshay shuruudahooda baarista. Shaqaalaha caafimaadka waa in ay adeegsadaan aqoontooda si ay u go’aamiyaan haddii uu jiro bukaan qaba astaamaha iyo calaamadaha lagu garto COVID-19 iyo haddii ay khasab tahay in bukaanka baaris lagu sameynayo. Waxaa jira xanuunno kale oo ku dhaca neefmareenka oo ka jira Minnesota, sida fuluuga ama kuduudiyaha, sidaas awgeed xirfadleyaasha caafimaadka waxa ay tixgelinayaan taariikhda safarka iyo waxyaabo kale marka ay baarista ku talinayaan.
Meesha ugu wanaagsan ee laga heli karo macluumaadka COVID-19 waa barta intarnetka ee Waaxda Caafimaadka Minnesota: https://www.health.state.mn.us/index.html
Dhakhtar Bowron: Dhakhaatiirta daryeeleysa bukaanka ay rumeysan yihiin in uu u baahan karo baarista korono faayrus waxay taleefan kula xiriiri karaan Waaxda Caafimaadka ee MDH si ay ugala hadlaan kiiska bukaankaas. Haddii shaqaalaha Waaxda Caafimaadka ee MDH ay oggolaadaan, dhakhtar ayaa saami dareere ah ka qaadaya sanka iyo afka qofka bukaanka ah, dabadeedna waxaa loo dirayaa Waaxda Caafimaadka ee MDH si loo soo baaro. Dabcan, cilmi- baareyaasha Waaxda Caafimaadka ee MDH ayaa naftooda aqoonsada oo baaristana si fudud ugu fulinaya “Qofka La Baarayo”.
Muddo intee le’eg ayuu faayruskan ku sii hari karaa meelaha uu gaaro?
Dhakhtar Bowron: Waxay u badan tahay waa ilaa dhowr saac, laakiin waxa ay ku xiran tahay meelaha uu gaaro. Caadi ahaan faayruska waxaa la isugu gudbiyaa neefmareenka sidii dhibco kala waaweyn – oo ah kubbado aad u yaryar oo xab ah. Xabka ku dhex jira dhibcaha ayaa faayruska ka dhigaya mid qoyan oo nool. Waxyaabo ka soo baxa duleello yaryar sida dharka iyo xaashiyaha wejiga lagu masaxdo ayaa hawada ku meereysta, markaasna faayrusku sidaas ayuu ku qallalaa oo kuna dhintaa. Meelaha aan lahayn duleellada sida birta macdanka ah iyo balaastiigga waxba kama dhex bixi karaan, oo sidaas ayuu faayruskii ku helayaa wakhti dheer oo uu meel sii yaalli karo oo uu wax ku sugo.
Dadku xanuunkan gabi ahaanba ma ka bogsan karaan?
Dhakhtar Bowron: Waa ka bogsan karaan oo waa xaqiiqo. In kasta oo ay wakhti dheer ku qaadan karto in ay si buuxda uga bogsadaan dadka qaba xaaladaha caafimaad-xumada joogtada ah ama uu sida daran ugu dhaco infakshanka korono faayrus.
Sidee ku ogaan karaa markaan u baahnahay in aan nafteyda karantiilo?
Dhakhtar Bowron: Haddii aad isku aragto calaamado ah xanuun neefmareenka ku dhaca, waxaa kuu fiican waa in aad adigu “is-karantiisho” adigoon ka fakareyn sababta xanuunka kugu keeneysa – korona faayrus, fuluu, hargab iwm. Su’aal sahlan oo baarista la xiriirta waxay noqoneysaa, “Ma la shaqeyn karaa, ama ma ag fariisan karaa, ama anigoo lugeynaya ma la socon karaa qof ku sugan xaaladdeyda oo kale?” Waxaa hubaal ah in ay aad u adag tahay in aan dadka ka dhex baxno culeyska ay nagu hayaan hawlaha na sugaya awgood, laakiin waxaa khasab nagu ah in aan dhammaanteen ku dadaalno inaanan xanuun u sii gudbin dad kale. Marka ugu yaraan, dadka isku arka calaamadaha xanuun soo haya waa in ay yareeyaan wakhtiga ay bannaanka la joogaan dadweynaha, waa in ay sameeyaan ka-hortagga ugu fiican (maasgaro, dhaqidda gacmaha iwm.), iyo waa in ay ka fogaadaan qoyska, asxaabta, ama dadka u nugul in uu ku dhaco korono faayrus, sida kuwa qaba xaaladaha caafimaad-xumada ee joogtada ah. Weliba dadku waxa ay u badan yihiin in ay xanuun isku dhex faafiyaan marka uu xanuun soo rito, hase yeeshee waa in uu qofba qofkii uu ka xanuun badan yahay ka sii go’doon badan yahay.
Warbixintan waxa lagu diyaariyey luuqado badan oo waxaa gacan ka geystay TPT NOW, Channel 2.5. https://www.tpt.org/post/introducing-tpt-now/
Isticmaal biyo nadiif ah iyo saabuun
Si boobsiis iyo xoog ah u dhaq gacmaha ilaa 20 ilbiriqsi
Mar kasta dhaq gacmahaaga!
OGEYSIISYO SAFARKA IYO CAAFIMAADKA
Ka hor intaadan safrin, iska hubso Meelaha ay CDC Mamnuucday in loo Safro faayruska Koroono (ama Coronavirus) awgiis.
SIDA AAD NAFTAADA UGA DIFAACAYSO CORONAVIRUS
Gacmahaaga si fiican ugu dhaq saabuun iyo biyo
Guriga joog marka aad xanuunsan tahay